साझा सरोकार Archives - South Asia Check
कोभिड-१९ को दोस्रो लहर : रेम्डेसिभिर, प्लाज्मा थेरापी र प्रोन पोजिसनबारे जान्नैपर्ने तथ्य नेपालमा कोभिड-१९ को दोस्रो लहर भित्रिएपछि स्थिति भयावह बन्दै गइरहेको छ । दिनहुँ कोभिड-१९ बाट संक्रमि... विस्तारमा
किन बारम्बार हुन्छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि ? के हुन् समाधानका उपाय ? नेपाल आयल निगमले दुई साताभित्रै दुई पटक पेट्रोल, डिजेल लगायतका पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको छ । गत... विस्तारमा
कोभिड-१९ को खोपबारे जान्नैपर्ने ६ तथ्य दीपक अधिकारी / साउथ एसिया चेक भारतबाट अनुदानमा प्राप्त कोभिड-१९ विरुद्धको खोप माघ १४ गतेदेखि नेपालमा... विस्तारमा
यसरी हुँदैछ कोरोना खोप लगाउने तयारी विभिन्न देशहरुमा उत्पादन भइरहेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको प्रभावकारिता हेरी हाल विश्वका केही देश... विस्तारमा
यस वर्ष ६०० मेगावट विजुली थपिँदैन चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको विजुली आउने बाटो । अर्थमन्त्री रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक बजेट पुस्तिकाको अनुसूची १८ मा भनिएको छ- यस आर्थिक वर्षभित्र नेपालको विद्युत उत्पादन ... विस्तारमा